Multi-Vitamin: ကမ္ဘာ့ တန်ဖိုးအကြီးဆုံး သင်္ဘောပျက်
ကမ္ဘာ့ တန်ဖိုးအကြီးဆုံး သင်္ဘောပျက်
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက နစ်မြုပ်ခဲ့တဲ့ ဒီသင်္ဘောကြီးကို အတ္တလန်းတစ်သမုဒ္ဒယာရဲ့ ရေအောက်ကြမ်းပြင်မှာ
ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့အတူ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တန်ဖိုးအရှိဆုံးသတ္တုတွေဟာ ဒီသင်္ဘောပျက်ကြီးနှင့်အတူ
SSGairsoppaလို့ခေါ်တဲ့ဒီနစ်မြုပ်ခဲ့တဲ့သင်္ဘောဟာ ငွေသတ္တု အောင်စပေါင်း ၇ သန်းကို
တင်ဆောင်ခုတ်မောင်းနေရင်းနှင့် နစ်မြုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကာလပေါက်ဈေးအရဆိုရင် အင်္ဂလန် ပေါင် ၁၅၅ သန်းတန်ကြေးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသင်္ဘောပျက်ကြီးကို မြောက်အတ္တလန်းတစ် သမုဒ္ဒယာရဲ့ မီတာပေါင်း ၄၇၀၀အနက်၊အိုင်ယာလန်ကျွန်းစုရဲ့မိုင်၃၀၀အကွာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေပိုင်နက်မှာ တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသင်္ဘောဟာ ၄၁၂ ပေရှည်လျှားပြီး ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းက တိုပီတို ဒုံးကျည်ထိမှန်ပြီး နစ်မြုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရှာဖွေရေးကုမ္မဏီရဲ့ အဆိုအရတော့ “ဒီသင်္ဘောမှာ နစ်မြုပ်တဲ့အချိန်က ပေါင် ၆ သိန်းဖိုးတန်ဖိုးရှိတဲ့ ငွေသတ္တု အောင်စ ၇ သန်းတင်ဆောင်ခဲ့ပြီး အဲ့ဒီအထဲက ငွေသတ္တု အောင်စ ၃ သန်းဟာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံအတွက် ငွေကြေးသွန်းလောင်းဖို့ အာမခံထားတဲ့ သတ္တုတွေဖြစ်ပါသတဲ့။ ဒါဟာ နစ်မြုပ်သွားတဲ့ သင်္ဘောတွေထဲက တန်ဖိုးအရှိဆုံး ကုန်စည်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်”
ကုမ္မဏီဟာ (ROV – Remotely operated vehicle) တွေကို သုံးပြီးတော့ ဒီသင်္ဘောပျက်ရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေကို လေ့လာစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကုမ္မဏီရဲ့ အကြီးအကဲ Mark Gordon က “ကျွန်တော်တို့ဟာ Side-scan sonar (အသံဖြင့် ထောက်လှမ်းနိုင်သော ကိရိယာ) ကို အရင်သုံးပြီးတော့ သင်္ဘောရဲ့ တည်နေရာကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လလောက်ထဲက ROV တွေသုံးပြီး သင်္ဘောကို အနီးကပ် စစ်ဆေးခဲ့တာပါ” လို့ ဆိုပါတယ်။
Posted by 925 at 08:10
အချစ်ရေးကံမကောင်းသော ဝန်ထမ်းတွေအတွက် ရည်းစားကြောင်...
ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး အာကာသ Beer
We Are the World (25 FOR HAITI) - Instrumental Po...
Best Bus Driver In The World
မူ နဲ့ လူ
LED မီးသီးပေါင်း ၂၄၀၀၀ အလှဆင်ထားတဲ့ အမျိုးသမီး ဝတ်...
ဟင်းသီးဟင်းရွက် အင်္ကျီ
နာဆာအဖွဲ့ကြီး၏ အန္တရာယ်အများဆုံး အကာသခရီးစဉ်
အမျိုး​သမီး​ သုံး​ဦး​ နိုဘယ်လ်ဆုချီး​မြှင့်​ခံရ
Superman နှင့်ဆင်တူ​အောင် မျက်နှာခွဲစိတ်မှုခံယူသည့်...
ခေတ်အဆက်ဆက်ရဲ့ Mercedes-Benz ကားများ
အလျှော်အစား နဲ့ မိတ်လိုက်တဲ့ပင့်ကူ (Black widow sp...
Chit San Maung at the ICM Office
အမွှာညီအမ နှစ်ယောက်ကို တစ်ပြိုင်ထဲလက်ထပ်တဲ့ ထိုင်းန...
သဘောင်္များ၏ Fi-Fi အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း
အမှိုက်ကားထဲ ရောက်သွားသည့် တီဗက်ဇ် အင်္ကျီများ
Angry Birds ဂိမ်း​​ပရိသတ် သန်း​​ ၄၀ ​​ကျော်ရှိပြီ...
လစ်ဗျား အာဏာရှင် ကဒါဖီ အသေ ဖမ်းမိ
အံ့ဖွယ် အစွမ်းပြကွက် (with boobs)
အင်မတန်မှ ကြီးမားတဲ့ မောင့်ဒုက္ခ
သဝန်တို အချစ်ကြီးသည့် ထိုင်ဝမ်အမျိုးသမီး ခင်ပွန်း၏...
ငါး​များ​ဖြင့်​ ​ခြေ​ထောက်ပြုပြင်ခြင်း​​ကြောင့်​ H...
မောင်းမ လက်သုံးပုံ ( သီပေါမင်း ၏ ကိုယ်လုပ်တော် စာရ...
တရုတ်နိုင်ငံမှ ကမ္ဘာကျော် မဟာတံတိုင်း​ကြီး​တွင် အက်...
karen song ( E bye bye .. believe me )
karen love song (wait for me)
အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်ရှိ ကမ္ဘာ့ စကိတ်ချန်ပီယံကလေး...(gu...
တရုတ်ဇိမ်ခံသ​င်္ဘော ​ရောင်း​ချပြီး​​နောက် မကြာမီပင် ...
Tatoo နှင့် Pig
စကြ၀ဠာပြန့်ကားမှုကို လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သူ ပညာရှင်သုံးဦ...
တော်တော်အခွက်ပြောင်တဲ့ Interview :D
ဟိုတယ်ဧည့် သည်များရဲ့ ထူးထူးခြားခြားတောင်းဆိုမှုမျ...
သေဆုံးသွားတဲ့ချစ်သူနဲ့ လက်ထပ်တဲ့ အမျိုးသမီး
သွေးစုပ်မျောက် (Vampire Monkey)
ဆင် နဲ့ တူသော ဝက်ပေါက်စကလေး
မင်းကို ချစ်တယ်.....ဒါပေမယ့် တော်ကီမပွါးနဲ့ !
အမွှေးပါတဲ့ ထူးဆန်းသော Trout ငါး
အပျင်းပြေလျှောက်ကြဦးမလား...ကမ္ဘာ့ အန္တရာယ်အကြီး ဆံ...
အာဏာပိုင်များ​​ ဖမ်း​​ဆီး​​ခံရမည်စိုး​​၍ ၆ လအရွယ်သ...
ကြယ်တံခွန်တစ်ခု​​ပေါ်တွင် ကြီး​​မား​​​သော ​​ရေပြင်အ...
Father Along -3charming sisters (ကောင်းမှကောင်း)...
You dont love God, if you dont love your neighbour...
အိ၃်မူကဲဘျူး (KBTI brothers)
ဟဲသးဝံ၃်ထီ၃်ယွz (KBTI brothers)
အဝေးထိန်းခလုတ်ဖြင့် လေထဲတွင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သော Vi...
ခင်ပွန်း​အား​ သတ်ဖြတ်စား​သောက်ခဲ့​သည့်​ အမျိုး​သမီ...
ထူးဆန်းလှပသော ဓါး များ
ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းအဆင့် ၃၀၀ မှာမပါတဲ့ ဖိလစ်ပိုင် တက္ကသို...
မိဘ နဲ့ သားသမီး ကွာခြားပုံ (မှားတယ်ဆိုရင် sorry ပါ...
Apple ကုမ္ပဏီ ပူး​တွဲတည်​ထောင်သူ Steve Jobs ကွယ်လွန...
Windows 1.0 to 8.0 (ယခင် windows နှင့် နောက်ဆုံးပေ...
ဒီယုန်မြင်လို့ ဒီချုံထွင် (ဟီး ဟီး ဟီး )
Johnny English Reborn (Mr.Bean ကားသစ် အမြည်းလေး)
ကမ္ဘာ့ ထူးခြားအံ့ ဖွယ်မှတ်တမ်းများ...
Windows 8 ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ​ရောင်း​ချမည်
ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အတ္တလန်တာ မြို့တော်ကြီး
ဟန်းနီးမွန်းထွက်တဲ့ ဇနီးမောင်နှံ အပြန်ခရီးမှာ သမီး...
အထူးအစားအစာ ခရုဥ (snail caviar)
အလွယ်ဆုံး Virus ရှိ / မရှိ စမ်းသပ်နည်း
Microsoft Windows 8 ၌ ယူနီကုတ်စံနှုန်းထားအား လိုက်န...
US စစ်တပ်မှာ ရေဒါကိုရှောင်ကွင်းနိုင်တဲ့ ရဟတ်ယာဉ်ရှ...
ဆယ်လီနာ ဂိုမက်ဇ် သီး​​သန့်​​ရုပ်ရှင်ကြည့်​​နိုင်ရန...
WORLD BEST SPORT ACTION EVER
သောက်ဖော်သောက်ဖက်များကို ယုံကြည်လျှင် ဤသို့ ဖြစ်တတ...
အယူသီး​​​သော ဖခင်​​ကြောင့်​​ အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် သမီ...
5 Powerful Foods that Lower Your Blood Pressure သေ...